Wednesday November 22, 2017 - 08:22:00 in Wararka by Super Admin
Mu'asasada Alkata'ib oo ah garabka warbaahineed ee Xarakada Al Shabaab ayaa faafisay Filim cusub oo ku saabsan dagaalkii xooganaa ee bilo ka hor ka dhacay deegaanka Buula Guduud duleedka magaalada Kismaayo.
Video-ga oo ladaawan karo muddo 18 daqiiqa ah ayaa lagusoo bandhigayaa ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo dagaallo culus tuulada Buula Guduud kula gelaya Maleeshiyaadka maamulka Axmed Madoobe ee Mareykanka iyo Kenya tababareen.
Isdaarkan oo loogu magac daray واغلظ عليهم ayaa muuqaal guud ka bixinaya dagaalkii malxamadda ahaa ee Buula Guduud waxaana dagaalkaas lagu dilay ku dhawaad 30 Askari iyadoona ciidamada Al Shabaab ay qabsadeen gaadiid dagaal iyo saanado hub ah.
Filimka ayaa lagusoo bandhigayaa halyaygii fuliyay weerarka naf-hurnimo oo lagu magacaabi jiray Cabdi Caziiz Cabdullaahi kanasoo jeeda Beesha Eelaay kaasi oo isagoo kaxaynayay gaari walxaha qarxa lagasoo buuxiyay gudaha ugalay saldhigga ciidanka maamulka Jubbaland ee Buula Guduud.
Sarkaal katirsanaa Sirdoonka dowladda oo lagu dilay degmada Buula Burde.